अब जति बिजुली बाल्यो, उति कम शुल्क – Nagarik Network
आस्था राउतलाई थुनामा राख्नु गलत : कोमल वली
काठमाडौं – राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले आस्था राउतलाई ४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रशासनले दिएको अनुमति गलत भएको बताएकी छन्। सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले अनुसन्धानका आधारमा थुन्ने अधिकार भएपनि भागेर जाने अवस्था, बाहिर राख्दा प्रमाण नष्ट हुने अवस्था, गम्भिर खालको अपराध गरेको र तीन वर्ष भन्दा बढी कैद हुने अवस्थामा मात्रै थुनामा राख्न सक्ने भन्दै उनले राउतको मुद्धामा यस्तो अवस्था नभएपनि थुनामा राख्नु गलत भएको बताइन्।
‘कानुनको मिसयुज भएको छ। फैजदारी अभियोगमा माफि पाएर उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने छैन्। तर उसले गैर कानुनी कार्य गरेको छ की छैन्। आस्थाले कानुनले निषेध गरेको कार्य गरेको छ छैन भन्ने हेरिनुपर्छ। गालि गलौच गरेको पनि छैन्। अपशब्द पनि गरेको छैन्। कानुननले जे जे गर्नुहुन्न भनेको छ त्यो गरेको देखिँदैन त्यो अवस्थामा थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन्’, वलीले भनिन्। बदनियत राखेर थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट स्वतन्त्र रुपमा बयान नहुन सक्ने तर्फ आशंका व्यक्त गरिन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक वर्ष भन्दा बढी कैद गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै वलीले राउतलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने भएपनि त्यसो नगरिएको बताइन्।
काठमाडौं- गायिका आस्था राउत ४ हजार धरौटीमा रिहा भएकी छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको आदेशमा उनी रिहा भएकी हुन्।
अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा उनीमाथि उजुरी परेको थियो।
काठमाडौं- मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारिता पेशामा प्रवेश गर्नेहरुले परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधानको सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरुले पक्ष विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले पत्रकारिता पेशामा नयाँ आउनेहरुका लागि लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको प्रावधानको पक्ष विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पत्रकारको परीक्षा लिने जिम्मा दर्शक र स्रोतालाई दिनुपर्ने बताए। दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशमा यो अभ्यास नभएको र अहिले नेपालमा यस्तो अभ्यासको आवश्यकता नरहेको उनले बताए। ‘पाठक, दर्शक र स्रोतालाई नै छुट दिनुपर्छ। कुन पत्रकारले कस्तो कुरा गर्दैछ भन्ने कुरा पाठकलाई किन नछोड्ने? यो अनुपयुक्त कुरामा हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। जुन कुरा साउथ एसिया, बेलायत, अमेरिका कुनै पनि देशम छैन्। हरेक कुराको परीक्षण हामीले किन गर्ने ? राष्ट्रियसभाबाट यो पास हुने अवस्था छ तर हामी विरोध गर्छौँ’, उनले भने।
विप्लवका कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिनेक्रममा बर्दियामा गोली चल्यो, एक प्रहरी घाइते
बर्दिया – प्रतिवन्धित नेकपा विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा वर्दियामा गोली चलेको छ। विप्लव समूहका कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागि प्रहरी जवान गंगा चौधरी घाइते भएका छन्। मधुवन नगरपालिका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय ढोढरीमा कार्यरत जवान चौधरीको तिघ्रामा गोली लागेको छ।
वर्दियामा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि उनलाई नेपालगञ्ज रिफर गरिएको छ। घटनास्थलबाट दुई जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले गोली प्रहार गर्ने प्रतिवन्धित विप्लव समूहका रोहित सुनार र जयबाहादुर ठाडामगरलाई पक्राउ गरेको हो।
सरकारले गलत मनसायले कानुन ल्याउन खोजेको छ : कांग्रेस नेता पौडेल
काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले हरेक कानूनहरु गलत मनसायका साथ ल्याएको बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियनले गरेको लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपरिहार्यता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अझै पनि नेपालमा लोकतन्त्रका लागि अनुकुल वातावरण नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट लोकतन्त्रलाई बचाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको धारणा राखे। नेकपा एकदलीय निरङ्कुसता तर्फ बढने आदर्शका साथ अगाडि बढेको भएपनि जनताको बहुदलसँग जोडेर आफुलाई जनवादसँग जोड्न लागेको आरोप लगाए। ‘नेकपाको आफ्नो आदर्श र सिद्धान्त एकातिर छ। जनमतको दबावम बाहाना अर्कोथरी गर्नुपरेको छ। बहुदल नमान्ने एकदलीय निरङ्कुसता लिएर देशलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने संकल्प लिएर आएको कम्युनिस्ट शक्तिले आफुलाई बहुदलसँग जोडेर, बहुदलीय जनवादसँग भनेर जनताले बहुदल माग्या छन् भने त्यतै तिर आफुलाई जोड्ने प्रयास गरेको छ’, उनले भने।
अधिकांश आयोजनाका काम अलपत्र
बर्दिया- जिल्लाको विकासले फड्को मार्ने आशा लाग्दा आयोजनाका कामले तीव्रता पाउने बेलामा अधिकांश आयोजनाका काम यतिखेर अलपत्र परेको छ। चार महिना अघिदेखि सरकारको प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका काम अलपत्र अवस्थामा छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत हुलाकी सडक, सरकारको प्राथमिकतामा परेको कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना र सघन सहरी कार्यक्रम अन्र्तगतको गुलरिया नगरपालिकाभित्र डेढ अर्बको कामले गति लिन सकेको छैन।
त्यस बाहेकका गुलरिया नगरपालिकाभित्रमा पर्ने फोर लेन सडक र ८ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालित सडक पुल निर्माण जस्ता अधिकांश विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन। निर्माण कम्पनी, आयोजना कार्यालय प्रमुख र स्थानीय प्रशासनको समन्वय हुन नसक्दा विकासका अधिकांश काम प्रभावित भएका छन्।
एउटा व्यक्तिको मुद्दा उचालेर कसैलाई फाइदा हुँदैन : डा. भट्टराई
काठमाडौं- समाजवादी पार्टीका सांसद डा.बाबुराम भट्टराईले विशिष्ट व्यक्तिहरुको मर्यादाक्रम नमिलेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसद वैठकमा बोल्दै सभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछिको वरियताक्रममा हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछिको मर्यादाक्रममा आउनुपर्ने सभामुख हो। तर दुर्भाग्य हामीले अरुको देखासिकि गरेर कार्यकारणीलाई अगाडि राख्यौँ’।
नीति निर्माण हुने थलो प्रतिनिधिसभा भएपनि कानुन बनाउने भन्दा कानुनको व्याख्या गर्ने मर्यादाक्रममा अगाडि रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘न्यायपालिका जसले व्यवस्थापिकाले बनाउने ऐन कानुनको व्याख्या गर्छ त्यसका प्रमुख पनि व्यवस्थापिकका प्रमुख भन्दा माथि राखेर लोकतन्त्रको गरिमालाई अवमूल्यन गरिरहेका छौँ। यहाँको नेतृत्वमा यो विषयमा ध्यान पुगोस भन्ने आग्रह गर्दछु।’
सुपारी, केराउ र मरिचपछि तस्करीको पालो छोकडा
वीरगन्ज – विदेशबाट आयात गरेर भारततर्फ अवैध निकासी हुने वस्तुमा सुपारी, मरिच र केराउपछि छोकडा देखिएको छ।
भारतमा अवैध निर्यात गर्न स्वदेशी मागको तुलनामा यस्ता वस्तु धेरै परिमाणमा आयात भएका छन्। पाँचवर्ष अगाडि तस्करीकै लागि आयात गरिने वस्तुको रुपमा सुपारी देखापरेको थियो। सुपारी तस्करीको विषय धेरै चर्चामा आएपछि त्यसको अवैध निकासीमा कडाइ गर्न सुरक्षा निकाय बाध्य भयो। त्यसपछि सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध निकासी र पैठारीका धन्दा चलाउने गिरोह सुपारी छोडेर मरिचतिर मोडिए। मरिचपछि केराउ अर्को यस्तै वस्तु बनेको थियो। अहिले छोकडा तस्करीको बिगबिगी देखिएको छ।
वीरगन्जको वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले माघ ८ मा ना५च ३२४५ नम्बरको महिन्द्रा पिकअप गाडीबाट अवैध निकासी गर्न लागिएको ३२ बोरा छोकडा बरामद ग-यो। त्यो छोकडाको तौल १६ क्विन्टल थियो। वीरगन्जको रानीघाटमा रहेको कृष्णा आटा तथा मसला उद्योगबाट भुजाखरिद गरेको बिल देखाएर छोकडा लैजान खोज्ने चालक र सहचालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पश्चिम ग्रामीण नाकातिर जान लागेको अवस्थामा वीरगन्जको जगरनाथपुरबाट वडाको टोलीले गाडी नियन्त्रण लिएका थिए।
नाडालको विजयात्रा जारी
मेलबर्न – निक किर्गियोगलाई स्तब्ध बनाउँदै राफाइल नाडाल अस्ट्रेलिया ओपन क्वार्टरफाइनलमा पुगेसँगै रोजर फेडेररको कीर्तिमानी ग्रान्ड स्लाम उपाधिलाई बराबरी गर्ने लक्ष्य जारी राखेका छन्। गत वर्ष आफूमाथि निकै आलोचना गरेका अस्ट्रेलियन प्रतिद्वन्द्वी निकलाई हराउँदै स्पेनिस स्टार नाडालले अन्तिम आठमा स्थान बनाएका हुन्। निकै प्रतिस्पर्धा बनेको खेलमा विश्व नम्बर एकसमेत रहेका नाडालले निकलाई ६–३, ३–६, ७–६(८÷६) र ७–६(७÷४) ले पराजित गरे।
बास्केटबलका महान् खेलाडी कोबे ब्रायन्टलाई विश्व टेनिसका स्टारले शोक व्यक्त गरेको दिनमा निकसँगै १५ वर्षीया कोको गउफले आफ्नो महिला डबलको प्रशिक्षणका क्रममा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेकी थिइन्। रोड लाभेर एरिनामा निकले भने कोबे ब्रायन्टको पूर्वक्लब एलए लकर्सको जर्सी लगाएका थिए। सर्वाधिक २४ ग्रान्ड स्लाम च्याम्पियन मार्गरेट कोर्टलाई सम्मानित गरेको दिन उनी रुष्ट देखिएकी थिइन्।
सोही दिन निक र नाडालबीचको खेलपश्चात् पनि केही गर्मागर्मी हुने आंकलन गरिए पनि दिन यसपटक सामान्य अवस्था रह्यो। खेलअवधिभर नाडालका हरेक चुनौतीमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका निक खेल सम्पन्नपश्चात् हात मिलाउने क्रममा केही नरम मुद्रामा देखिएका थिए।
जसले पछिल्लो वर्ष यी दुईबीचको तनावपूर्ण सम्बन्ध बिर्र्सिएको अवस्था देखिएको थियो। ‘जब उनले (निक) आजको खेलशैलीअनुरूप सकारात्मक स्वभाव देखाउँछन् भने उनले खेलक्षेत्रलाई धेरै योगदान दिन सक्नेछन्। उनी यस टुर्समा निकै प्रतिभावान् खेलाडी हुन्। प्रतियोगिता अवधिभर उनको खेलशैली निकै राम्रो छ,’ स्पेनिस स्टार नाडालले भने। १९औं पटक ग्रान्ड स्लाम च्याम्पियन नाडालले क्वार्टरफाइनलमा अस्ट्रियाका डोमिनिक थिमविरुद्ध चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्।